नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली : विमानस्थल निर्माणदेखि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसम्म- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — एभरेष्ट बैंक र महाराजगञ्जस्थित सहारा फिजियोथेरापी अस्पतालबीच छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । अस्पतालले बैंकका कार्डबाहक, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता र बैंकका कर्मचारीहरूलाई विशेष छुट दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र सहारा फिजियोथेरापी अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हरिकुमार लम्सालले सो सम्झौता (एमओयू) आदानप्रदान गरे । कार्यक्रममा डा. लम्सालले बैंकका सबै कार्डबाहक, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता र कर्मचारीहरूलाई अस्पतालले विभिन्न सेवाहरूमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १४:२६